Aynu Soo Bandhigno Oo Aynu Jaangooyo Asturnaanta | Martech Zone
Sabti, Agoosto 7, 2010 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Maaddaama Google iyo Facebook ay sii wadaan inay xukumaan, halkaas waa wayn gaarka ah walaac taas oo lagu soo qaaday internetka… waana sax.
Waxaan ku doodi karnaa maalinta oo dhan sida goobahu u ururinayaan, adeegsanayaan ama xitaa u iibinayaan xogtaada shaqsiyeed… ama xitaa haddii ay awoodi karaan…
Waxaa jira dhowr qodob oo muhiim ah waxaan aaminsanahay:
Maaha mas'uuliyadda shirkad inay go'aansato sida loo isticmaalo macluumaadkaaga mar haddii aad si indho la'aan ah u siiso iyaga ... taasi waa masuuliyadaada.
Dhanka kale, Macaamiisha ma yaqaanaan sida shirkaduhu dhab ahaan u isticmaalayaan xogtooda - marka si sax ah ayey u cadhoodaan markay ogaadaan in loo isticmaalay qaab aysan fileynin. Bogagga iyo bogagga xulashooyinka jahwareerka leh iyo hadalada asturnaanta ee aan waxba ka ahayn legalese oo leh godad le'eg Texas oo lagu socdo ma aha jawaabta.
Haddii shirkadu ururineyso xogtaan, waa mas'uuliyadooda inay lahaadaan ilaalin si ay u hubiyaan in shaqaalaha oggolaanshaha kaliya ay heli karaan.
Halkii ama ku doodi lahayd faa'iidooyinka ama sharciyada asturnaanta, maxaan u yeeli waynay halkii diirada saar shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay ula shaqeeyaan shirkadaha si ay u soo saaraan nidaam mideysan oo si wax ku ool ah ugu gudbinaya sida macluumaadkaaga shakhsiyeed looga faa'iideysto. In badan oo la mid ah Creative Commons waa jawaabta furan ee laga helayo maaraynta xuquuqda dhijitaalka, waa inaan helnaa asturmo wadaag ah oo macaamilku si fudud u dheefshiidi karo si uu u fahmo. Tusaalooyinka qaarkood waxay noqon karaan:
Hadday yihiin iyo in kale xogta waa la iibinayaa dhinac saddexaad.
Hadday yihiin iyo in kale xogta waa la helayaa dhinacyada saddexaad.
Hadday yihiin iyo in kale xogta si qarsoodi ah ayaa loo ururinayaa waxaana loo qaybiyey dhinacyada saddexaad.
Hadday yihiin iyo in kale xogta si qarsoodi ah ayaa loo ururinayaa gudahana loogu qaybiyey.
Hadday yihiin iyo in kale xogta waxaa loo isticmaalay shaqsi ahaan bartilmaameed.
Hadday yihiin iyo in kale xogta si qarsoodi ah ayaa loo isticmaalaa bartilmaameed.
Hadday yihiin iyo in kale nashaadaadka shaqsi ahaan baa loola socdaa.
Hadday yihiin iyo in kale waxqabadyada waxaa loola socdaa si qarsoodi ah.
Iyada oo ay weheliso haddii xogta la dabagalayo oo la qaybinayo, waxaan sharxi karnaa sida loo adeegsado:
In loo iibiyo macaash.
Si aad u siiso khibrad macaamiisha u gaar ah.
Si loo bixiyo deeqo shaqsiyeed iyo xayeysiin.
In kor loo qaado tayada wax soo saarka guud.
Shirkaduhu markaa way sii fogaan karaan inay u sii daayaan xogta shakhsiga macaamiisha. Google ayaa runtii ku bilaabay tan iyaga Maareynta Xisaabaadka konsol, halkaas oo aan dib ugu eegi karo qaar ka mid ah macluumaadka, u burburin karo taariikhdayda, ama xitaa aan uga joojin karo inay adeegsadaan.
Ka ganacsade ahaan iyo macaamil ahaan, ma rabo joojin shirkadaha ka faa'iidaysta xogtayda gaarka ah. Waxaan aaminsanahay iyadoo shirkaduhu sii wadaan inay ururiyaan macluumaadka aniga igu saabsan, waxay awoodaan inay si fiican iigu adeegaan. Tusaale ahaan, waxaan u malaynayaa inay caadi tahay in Apple taqaano maktabaddayda Muusiga, tusaale ahaan, maadaama ay dhab ahaan soo jeediyaan talooyin caqli badan oo ku salaysan taariikhdayda.
Tags: DataData Securitygaarka ah